I-Redis 6.0 isivele ikhishiwe futhi iza nokuthuthuka okuningana okuphawuleka | Kusuka kuLinux
Uhlobo olusha lweRedis 6.0 seluyatholakala ngemuva kwezinyanga ezine kukhishwe i-RC1. Kulabo abangajwayelene neRedis, kufanele wazi ukuthi lolu uhlelo lokulawulwa kwedathabheyisi ebaluleke kakhulu ebhalwe ku-ANSI-C futhi isatshalaliswa ngaphansi kwelayisense le-BSD.
Le nguqulo ezinzile iza nokuguqulwa okuphawulekayo kuzici ezintsha, njengokusha Iphrothokholi ye-RESP3, umsebenzi "Inqolobane eseceleni yeklayenti", i-ACL (uhlu lokulawula ukufinyelela), imiyalo ye-Redis, amafayela we-RDB, njll.
Izici ezintsha ezintsha ze-Redis 6.0
Enye yezinto ezintsha ezisezingeni eliphakeme zale nguqulo entsha I-RESP3, umthetho olandelwayo omusha ozikhethela, ngokusho konjiniyela bayos bekudingeka ngoba umthetho olandelwayo wakudala, i-RESP2, ubungalingani ngokwanele. Umqondo oyinhloko nge-RESP3 bekuyikhono lokubuyisa izinhlobo zedatha eziyinkimbinkimbi ngqo zisuka eRedis, ngaphandle kokuthi iklayenti lazi ukuthi yiluphi uhlobo lokuguqula "ukuhleleka okuyisicaba" noma izinombolo ezibuyisiwe esikhundleni samanani weBoolean afanele, njalonjalo.
Esinye isici esisha kuRedis 6.0 yi-ACL okuyi Kwenzelwe ukwahlukaniswa ukuvikela idatha kusuka emaphutheni wohlelo lokusebenza. Into enhle ngalokhu okungeziwe ukuthi manje sekukhona i-Redis module interface ye-ACL, ekuvumela ukuthi ubhale izindlela zokuqinisekisa ngokwezifiso.
Inqolobane ethuthukisiwe ohlangothini lwekhasimende, kungenye yezinto ezintsha zale nguqulo, kusukela yenziwe kabusha yhilahle indlela yokulondolozwa kwesikhashana ye-niche yavumela ukusetshenziswa kwamagama wamagama, okuyizindlela ezingcono kakhulu. Ngaphandle kwalokho, umsebenzi walekelelwa "yimodi yokudlulisela"Kungaba wusizo olukhulu ukwengeza imodi entsha edinga ukuthi iseva ibambe isimo esincane kumakhasimende.
Uma usebenzisa imodi yokudlulisa, iseva ayisazami ukukhumbula okhiye abacelwe iklayenti ngalinye. Ngokuphambene, amakhasimende abhalisela iziqalo ezisemqoka. Umphumela walolu shintsho ukuthi ayisekho imilayezo, kepha kuphela iziqalo ezikhethiwe futhi akukho mzamo wememori ohlangothini lweseva.
Ngaphezu kwalokho, imodi "yokungena / ukuphuma" manje isiyasekelwa, ngakho-ke abasebenzisi abangasebenzisi imodi yokusakaza bangatshela isiphakeli ngqo lokho iklayenti elizokulondoloza ukuze kunciphise inani lemiyalezo yokusebenza
Ngakolunye uhlangothi singathola Ukuthuthuka kwe-ACL, ukuthi kwasekuqaleni, umyalo omusha we-ACL LOG manje ukuvumela ukuthi ubone wonke amaklayenti aphula ama-ACL, ukuthi imiyalo yokufinyelela engafanele nokuthi izinkinobho zokufinyelela abangakwazi ukufinyelela kuzo noma imizamo yabo yokuqinisekisa ehlulekile.
Okwesibili, Umsebenzi we-ACL GENPASS uphinde wenziwa kabusha, manje isebenzisa i-SHA256-based HMAC futhi yamukela impikiswano yokuzikhethela ukutshela isiphakeli ukuthi zingaki izingcingo ezingasetshenziswanga ezingasetshenziswanga ezifuna ukukhiqizwa. I-Redis ikhiqiza ukhiye wangaphakathi lapho i / dev / urandom iqala bese isebenzisa i-HMAC kwimodi yokuphikisa ukukhiqiza ezinye izinombolo ezingahleliwe: ngale ndlela ungasebenzisa kabi i-API bese uyishayela noma kunini lapho ufuna khona, ngoba izoshesha kakhulu, kuchaza umqambi wohlelo.
Isithuthukisi se-PSYNC2 sivumela iRedis ukuthi ivuselele kabusha ingxenye kancane kaningi. Eqinisweni, manje usunganciphisa ama-PING wokugcina kuphrothokholi, ukuze ukuphindaphinda namakhosi kungenzeka athole i-offset efanayo.
Imiyalo ye-Redis eyenziwe ngcono ngokulibaziseka kwesikhathiHhayi i-BLPOP kuphela neminye imiyalo ebekade yamukela imizuzwana manje esamukela izinombolo zedesimali, kepha ukulungiswa kwangempela kuthuthukisiwe ukuze kungabi ngaphansi kwenani lamanje le- "HZ", ngaphandle kwenani lamakhasimende axhunyiwe.
Ekugcineni olunye ushintsho olubalulekile lwale nguqulo yi- aAmafayela e-RDB athuthukisiwe, manje asheshe ukulayishwa. Ngokuya ngokwakhiwa kwefayela uqobo (amanani amakhulu noma amancane), ungalindela ukuthuthuka okungama-20-30%, kuya ngonjiniyela. Umyalo we-INFO nawo uyashesha manje lapho amaklayenti amaningi exhunyiwe, inkinga ekudala yaxazululwa.
I-Redis 6.0.0 itholakale ukulanda kusuka kuwebhusayithi yayo esemthethweni.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-Redis 6.0 isivele ikhishiwe futhi iza nokuthuthuka okuningana okuphawulekayo